हात्तीछापको ‘छाप’ गोल्ड स्टरमा अझै गाढा - Aarthiknews
हात्तीछापको ‘छाप’ गोल्ड स्टरमा अझै गाढा
नेपाली पहिचान बोकेको नेपालीलाई पनि सँगै लैजानुपर्छ भन्ने सोचका साथमा नेपालकै उत्पादन खोज्नुपर्ने बेला पनि भयो । अहिले नेपालीहरु नेपाली जुत्ता लगाउन पाउँदा गर्व महशुस गर्छन् । त्यहाँको ओर्जिनल जुत्ताको सस्तो मूल्य तिर्न नोपलीहरु तयार हँुदैनन् त्यो भनेको सोचाइ हो । यस्तो सोचलाई परिवर्तन गर्न केही समय लाग्छ ।
हात्तीछाप चप्पलबाट गोल्ड स्टार जुत्तासम्म कसरी पुग्यो, यसको पृष्ठभूमि के थियो ?
यो कम्पनी आजभन्दा ४० वर्ष अगाडि हात्तीछाप चप्पलको ब्रान्डका रुपमा हेटौंडाबाट शुरु भएको कम्पनी हो । हेटौंडाको कम्पनी नै गोल्ड स्टारको मदर कम्पनी हो । हेटौंडामा हात्तीछाप चप्पल बनाइन्थ्यो । त्यसको १५÷१६ वर्षपछि जुत्ता बनाउन थालियो त्यो जुत्ता बनाउने क्रममा पहिला अर्किसपार्क भन्ने जुत्ता बनाइन्थ्यो । त्यसपछि गोल्ड स्टार शुरू गर्याै । एकदमै सस्तो र बलियो खालको जुत्ता निकाल्यौ । त्यो एकदमै लोकप्रिय हुँदै गयो, बलियो र सस्तोमा जुत्ता पाउँदा सबै जना खुशी भए ।
त्यो बेलामा नेपालमा र भारतमा पनि एक्सपोर्ट गरेका थियौं । पछिल्लो समयमा हाम्रो उत्पादनलाई आधुनिक सजावट (डिजाइन) खालको जुत्ता ल्याएका छौं । यसलाई हामीले राम्रोसँंग ब्रान्डिङ गरिरहेका पनि छौं ।
पहिलो हात्ती छाप चप्पल र हात्ती उस्तैउस्तै भनेको सुनिन्थ्यो । तर, अहिले यसरीे ब्रान्डिङ गर्नुको कारण के हो ?
गोल्ड स्टार जुत्ता र यसको बजारको मात्र हामीले टार्गेट गरिरहेका थियांै । सस्तोमा बलियो जुत्ता मात्र प्रदान गरिरहेका थियौं । अब चाहिँ यो मात्रै गरेर हुँदैन अब नेपाली पहिचान बोकेको नेपालीलाई पनि सँगै लैजानुपर्छ भन्ने सोचका साथमा नेपालकै उत्पादन खोज्नुपर्ने बेला पनि भयो । अहिले नेपालीहरु नेपाली जुत्ता लगाउन पाउँदा गर्व महशुस गर्छन् । त्यसकारण नयाँ जुत्ता ट्रायलमा ल्यायौं र त्यो एकदमै पपुलर पनि भयो । नयाँ पुस्ताले एकदमै मन पराइदिनु भयो र हामी एकदमै इन्करेज भएर हरेक हप्ता नयाँ–नयाँ डिजाइन बजारमा ल्याउन थाल्यौं ।
गोल्ड स्टारको कुरा गर्दा भारतलगायतका बजारमा यसको प्रयोग उच्च रहेको पाइन्छ । तर, नेपालकै शहरी उपभोक्ताको मन अझै पनि जित्न सक्नु भएन जस्तो छ नि ?
हाम्रो सोचाइ अहिले पनि विदेशी वस्तु वा सामान मात्र राम्रो हुन्छ भन्ने छ । त्यो सोचलाई परिवर्तन गर्नको लागि समय लाग्छ होला । स्थानीय उत्पादन राम्रो छैन है भन्नेहरुको लागि प्रयोग गर्दै जाँदा होइन हैँ स्थानीय वस्तु पनि राम्रो रैछ भन्ने धारण विस्तारै परिवर्तन भैइरहेकोे छ ।
बजारमा धेरै नक्कली जुत्ताहरु छन् । विश्व विख्यात ब्रान्डहरु पनि नक्कली आइरहेका छन् जस्तै अडिडस, नाइक, रिकप यी ब्रान्डका जुत्ताहरुको ब्रान्डका नाममा नक्कली जुत्तालाई नेपालीहरु पैसा तिर्न तयार छन् । तर, त्यहाँको ओर्जिनल जुत्ताको सस्तो मूल्य तिर्न नोपलीहरु तयार हँुदैनन् त्यो भनेको सोचाइ हो । यस्तो सोचलाई परिवर्तन गर्न केही समय लाग्छ ।
यहाँले भन्नु भएको जस्तो विश्वस्तरीय ब्रान्डको नक्कली उत्पादनहरु बजारमा प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ, यसले चाँिह तपाईहरुको ब्राण्डलाई कस्तो खालको असर पारेको छ ?
हाम्रो ब्रान्डलाई मात्र होइन, हरेकलाई जुत्ता उद्योगलाई नै एकदमै असर गरिरहेको छ । सस्तो जुत्ता आएको छ तर गुणस्तर छैन । सबैको भन्दिन म तर धेरै जुत्ताहरु सस्तो गुणस्तरहीन जुत्ता नेपालमा आइरहेको छन् । ती जुत्ताको ट्याक्स लुकाएर ल्याएको छ । बजारमा सस्तोका पाइरहेको छ । त्यसले गर्दा सरकारलाई पनि राजस्व छलिराखेको छन् जस्तो लाग्छ । सरकारले ट्याक्स कमाएको पनि होइन त्यसले गर्दा यो चाँहि सिफ्ट हुनैपर्छ । धरै नेपाली जुत्ता उद्यागीहरु छन् जसले कमाएर नेपालको अर्थतन्त्रलाई सहयोग गरिरहेको छन । नेपाली उत्पादनलाई मार्ने किसिमको भयो ।
कुनै बेला राज्य संयन्त्रको सोचको कारण गोल्डस्टार ब्रान्ड धर्मराएको जस्तो देखिन्थ्यो, अहिलेचाहिँ माथि उठेको अवस्था हो ?
अहिले यो कम्पनी मेरो श्रीमान् र मैले हेरिरहेका छांै । यो कम्पनीलाई साथ दिने नेपालभरिको युथ नै हुन् । उहाँहरुको इच्छालाई पूरा नगरेसम्म नेपालमा प्रतिस्पर्धामा आइपुग्न गाह्रै छ । बजार धेरै प्रतिस्पर्धी छ । चुप लागेर बसेर हुँदैन भनेर हाम्रो धेरै कुरा ब्यान्ड भएको भएर हामीले यसलाई फेरि सञ्चालन गरेका छौ । नेपाल भरि ३२ वटा शोरूम भइसक्यो । मान्छेले जुत्ता नै पाउँदैन गोल्डस्टार नाम सुनेको छु, कहाँ पाइन्छ भनेर सोध्छन् ।
अहिले गोल्ड स्टारका उत्पादन भाटभटेनीका सबै ठाउँमा राखेका छांै । गोरखा डिपार्टमेन्ट स्टोरमा राख्ने विचारमा छौं । अर्को ५÷६ वटा डिपार्टमेन्टहरुमा केही महिना पछाडि खोल्दै छौ । यसले गर्दा मान्छेलाई कहाँ पाउछ भन्ने भएन अहिले त अनलाइन पनि भएको भएर कसैलाई पनि सामान वा वस्तु पाउन गाह्रो भएन ।
गोल्ड स्टार जुत्ता बनाउनको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ र जनशक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ ?
हामीले मेसिन चाहिँ सबै इटालीबाट ल्याएको हौं । पहिलादेखिनै इटालीबाटल्याएको हो । त्यसले गर्दा गुणस्तर भएको हो । कच्चा पदार्थहरु ताइवान, चीन, इटालीबाट ल्याउछौ । काम गर्नेहरु २००० भन्दा बढी छन । अहिलेसम्म ३००० हुन्थ्यो अहिले सेल्स घटिरहेको र मार्केट डाउन भएको भएर २००० मजदूरहरू छन ।
सबैको भन्दिन म तर धेरै जुत्ताहरु सस्तो गुणस्तरहीन जुत्ता नेपालमा आइरहेको छन् । ती जुत्ताको ट्याक्स लुकाएर ल्याएको छ । बजारमा सस्तोका पाइरहेको छ । अहिले गोल्ड स्टारका उत्पादन भाटभटेनीका सबै ठाउँमा राखेका छाैं । गोरखा डिपार्टमेन्ट स्टोरमा राख्ने विचारमा छौं ।
अहिले हामीसंग ११०० भन्दा बढी महिलाहरु हुनुहुन्छ । काम गर्ने लेभर राख्दा ३/४ महिना ६ महिना बस्ने र विदेशिने हुन्छन् नेपालमा पनि विदेशमा भन्दा धेरै अवसर छन् । तर, उनीहरु विदेश जान नै रुचाउनु छन् ।
घरमा खाली बसिरहनु भएको महिलालाई ६ महिना तालिम दिन्छौं र तालिम दिएकवापत पनि पैसा दिने गरेका छौं । यसले गर्दा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ । उहाँहरुको घर चलाउन बच्चालाई पढाउन सजिलो भएको छ । उहाँहरु आफै आत्मनिर्भर भएको भएर उनीहरुको रुची बढदै गएको छ । विदेश जाने धेरै दाजुभाइलाई सोध्छौ कति दुःख गर्नु भएको छ ? कमाई कति छ ? भनेर तर यहाँभन्दा निकै कम कमाई छ त्यहाँ दुःख गरेर १२÷१५ जना एउटा कोठामा कोचिएर सुत्नुहुन्छ । गर्मीमा काम गरिरहनुु भएको छ त्यो भन्दा नेपालमा धेरै अवस्था ठिक छ । हामी विदेश जाँदा जति नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनी भेट्छौ उहाँहरुलाई नेपाल फर्किनुस र हाम्रो फ्याक्ट्रीमा आएर काम गर्नुस भनेर आएका छौं । भारततिर जाँदा कति नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु काम गरिरहेको देख्दा नरमाइलो लाग्छ ।
ढावाहरुमा, ड्राइभरमा ५÷६ हजार कमाएर काम गरिरहेको हुन्छन साहुले गालि गरिरहेको सन्छौ । त्यो देख्दा नराम्रो लाग्छ । हामीले बोलाएकामध्ये कतिजना आउनु पनि भएको छ । हामीले चिठ्ठी लेख्दिन्छौ । हामीसँग भेटेर कुरा गरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ । हाम्रो सोच भनेको स्वदेशी उद्योगलाई बढुवा गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । हामी यस्तो दुःख गरेर यही केही गर्छु भन्दा सरकारबाट पनि सहयोग हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
गोल्ड स्टार ब्रान्डका आगामी योजनाहरु के–के छन् ?
ब्रान्डिङको हिसावले ३२ वटा शोरुम भइसक्यो । नयाँ–नयाँ डिजाइन उपभोक्तालाई दिइरहेका छांै । यी नयाँ ब्रान्डहरु उपभोक्ताले एकदमै स्वीकार गर्नु भएको छ । अहिले उहाँहरुको समस्याको बारेमा हामीलाई तुरून्तै थाहा हुन्छ सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट । जबसम्म ग्राहकको चाहान थाहा हुँदैन तबसम्म हामी अगाडि आउन सक्दैनौ ।
नेपालमा जुत्ताको बजार कस्तो पाउनु भएको छ ? स्वदेशी उत्पादनले बजारको मागलाई कतिसम्म धान्न सकिराखेको अवस्था छ ?
स्वदेशी जुत्ताको प्रभाव धेरै नै छ । अहिले पनि धेरै उद्योगहरु आउँदै छन् । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको छ । मेरो विचारमा नेपालमै सरकारले यो उद्योगलाई केही छुट दिन सक्यो भने जुत्ता उद्योग नै पहिलो बन्न सक्छ भन्ने लाग्छ । जहाँ हामी नेपाली आफंै सफल हुन सक्छौं ।
नेपालमा दर्जनौं जुत्ता उद्योगछन्, अझै पनि विदेशी जुत्ताप्रति मानिस आकर्षित भएको देखिन्छ, नेपाली उद्योगीहरुले नेपालीको मन जित्न नसेन वा सफल हुन सकेको के हो ?
विदेशी जुत्ताको गुणस्तर अनुसार हामीले दिन सकेनौ भने त हामी पछि पर्छौ । ग्राहक पनि स्मार्ट भइसक्नुभयो। हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न, मूल्य निर्धारण गर्न, र गुणस्तरयुक्त नयाँ–नयाँ डिजाइनका सामान दिन सक्नु पर्याे । बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ । विदेशी जुत्ताहरु धेरै आइरहेको छन् । नेपाली भन्ने बित्तिकै नेपाली जुत्ता त सस्तो हुनुपर्छ भन्ने जुन धारणा छ, त्यसलाई मेन्टेन गरेर ब्रान्डिङ गर्ने धेरै गाह्रो र प्रतिस्पर्धाको कुरा हो ।
मूल्य र डिजाइनमा स्वदेशी उपभोक्ताको मन जित्न नसकेको अवस्था छ, विदेशी उपभोक्ताको मन चाहिँ कसरी जितिरहनु भएको छ ?
इन्डियाको मार्केट चाहिँ पुरानै हो । त्यहाँ गोल्ड स्टार एकदमै लोकप्रिय छ । सस्तो र बलियो भएका कारणले होला । इन्डियामा गोल्ड स्टारको धेरै नक्कली जुत्ताहरु बनाइरहेका छन् । गोल्ड स्टारको माथि आर नराखेर प्रत्येक महिना गोल्ड स्टारको नक्कली जुत्ता बन्ने गरेका छन् । यसलाई हामी बन्द गराउँदै हिड्ँछौ फेरि नयाँ कम्पनी खोलेको हुन्छन् ।
चीनबाट पनि कति नक्कली गोल्ड स्टारहरु आएका छन् । त्यसबाट नै थाहा हुन्छ कि गोल्ड स्टार कति लोकप्रिय छ भनेर । अहिले मलेसिया, अस्ट्रिेलियामा हाम्रो उत्पादन पठाएका छौं । अमेरिका पठाउँदै छौ । मुख्यता नेपाली उपभोक्ताले नै माया गरेर हो । हामीले सुनेको अस्ट्रिेलिया जाने भाइबहिनीहरूले धेरै लाने भनेकै वाइवाइ चाउचाउ र गोल्ड स्टार जुत्ता भनेको सुनिन्छ । उहाँहरुले १०÷१५ जोर जुत्ता लगेर उता बेच्नु हुन्छ । धेरै जना आइरहनु भएको थियो गोल्ड स्टारको शोरूम खोल्ने भनेर हामी आफै त होइन अस्ट्रिेलियाको सिड्नी र मेलबर्नमा शोरूम खोल्दै हुनुहुन्छ । अस्टिे«लियाको लागि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले त मन पराइदिनु हुन्छ त्यहाँको ग्राहकले पनि मन पारइदिनु भयो भने हाम्रो नेपाली उत्पादनको लागि ठुला प्रोत्साहन हुने छ ।
कच्चा पदार्थ विदेशीबाटै आयात गरेर विदेशी ब्रान्डसँगै प्रतिस्पर्धा गर्न कतिको सहज छ ?
प्रतिस्पर्धा छ, डिजाइन पनि फरक–फरक बनाउनु पर्छ । पहिला– पहिला हामी एकै किसिमको डिजाइन बनाउथ्यांै त्यही डिजाइन १०÷१५ वर्ष चल्थ्यो । गोल्ड स्टार भन्ने बित्तिकै कालो गोल्डस्टार जुत्ता मात्र मानिसले लगाउथे । तर, अहिले हामीले धेरै फरक–फरक डिजाइन निकालेका छौ । अहिले हामीले जिटेन सिरिज भन्ने निकालेका छौं। त्यो एकदमै युवामा चलेको छ । त्यस्तै गरेर नयाँ–नयाँ डिजाइन निकाली रहेका छौ । किनभने प्रतिस्पर्धामा त बस्नुपर्छ ।
घरमा खाली बसिरहनु भएको महिलालाई ६ महिना तालिम दिन्छौं र तालिम दिएकवापत पनि पैसा दिने गरेका छौं । यसले गर्दा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ । गोल्ड स्टार भन्ने बित्तिकै कालो गोल्डस्टार जुत्ता मात्र मानिसले लगाउथे । तर, अहिले हामीले धेरै फरक–फरक डिजाइन निकालेका छौ । अहिले हामीले जिटेन सिरिज भन्ने निकालेका छौं। त्यो एकदमै युवामा चलेको छ ।
अहिले तपाईहरुले बजारमा ल्याउनु भएको जुत्ता कति प्रकारका छन् ? कुन उमेरदेखि कुन उमेरसम्मको लागि कति मूल्य तिरेर लिन सकिन्छ ?
हामी कहाँ धेरै प्रकारका जुत्ता छन् । प्रत्येक दिन प्रत्येक हप्ता ७÷८ वटा डिजाइन बजारमा पठाउँछौ । जुन बजारमा स्वीकार हुन्छ त्यसलाई पुनः निकाल्छौ । अहिले हामीले गर्मीको लागि महिला पुरूषले लगाइरहेको जुत्ता चप्पल बनाइरहेका छौ । अहिले त्यो हाइलाइट भएको छ । हामीले विज्ञापन पनि गर्दैछौ त्यसमा । नर्सहरुको लागि जुत्ताहरु बनाइरहेका छौ । मूल्य २२ सयभन्दा माथिको मूल्य हो नत्र ११००/१२०० मा पाइन्छ । गोल्ड स्टारले अहिले पनि सस्तो दरमा गुणस्तर जुत्ता नै दिने हो ।
कतिपयले उद्योगले चीनलगायत तेस्रो मुलुकबाट रेडिमेट जुत्ता आयात गर्ने र नेपालमा स्वदेशी ब्रान्ड भनेर बिक्री गरेको सुनिन्छ ? अहिले तपाईहरु स्वदेशी ब्रान्ड भनेर लागिरहनु भएको छ तपाईहरुलाई त्यसले अप्ठ्यारो पार्दैन ?
जसरी नक्कली जुत्तालाई तुरुन्तै बन्द गरेका थियौं । त्यसरी नै सरकारले बन्द गर्नुपर्र्ने हुन्छ । सरकारले यस्तो उत्पादनलाई कडाइ गरेर निरुत्साहित गर्यो भने बास्तवमा नै स्वेदशी उद्योगलाई सहयोग गर्ने, उद्योगीले गरेको लगानी अझ् देशका लागि सही रुपमा सबैले त्यसको प्रतिफल पाउथे ।
काठमाडौंको सबैभन्दा ठुलो फ्याक्ट्री हो हाम्रो । ३००० लेभरहरु पालिरहेका छौं तर यो सबै कुरा गर्दा पनि सरकारबाट चाहिँ कुनै प्रोत्साहन नहुँदा दुःख लागेको छ । नेपाली उत्पादनलाई माया गर्दै जानुस्, नेपाली उत्पादन लगाइदिनुस् । कुनै पनि सरकारी कर्मचारीले गोल्ड स्टार मात्र होइन कुनै पनि नेपाली प्रोडक्स लगाइदिनुस् प्रयोग गर्दिनुस त्यसले गर्दा प्रोत्साहन हुन्छ ।
स्वदेशी उत्पादनलाई सरकारले निकै प्रोत्साहन गर्दै आएको देखिन्छ, यो अनुरूपको कार्यान्वयन तहमा कस्तो प्रभाव पारेको छ, सरकारले स्वदेशी उत्पादन नै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्दा कस्तो पाउनु भएको छ ?
त्यति धेरै झुकाव देखिएको छैन । स्वदेशी ब्रान्ड भन्नाले सरकारको नजरमा कार्पेट अथवा पश्मिना त्यो मात्र अगाडि छ जस्तो लाग्छ जुत्ता चप्पल भनेको केही होइन भनेको जस्तो देखिन्छ । जुत्ता चप्पलको पनि ठूलो मार्केट छ । जुत्ता चप्पल स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा पनि लैजान सकिन्छ है भनेर प्रोत्साहन सरकारबाट आएको छैन । तर, हाम्रो लागि केही त दिनु पर्यो नि अहिले पनि काठमाडौंको सबैभन्दा ठुलो फ्याक्ट्री हो हाम्रो । ३००० लेभरहरु पालिरहेका छौं तर यो सबै कुरा गर्दा पनि सरकारबाट चाहिँ कुनै प्रोत्साहन नहुँदा दुःख लागेको छ ।
तपाईको विचारमा स्वदेशी उत्पादनलाई अझ गुणस्तर र प्रतिस्पर्धी बनाउन के गर्नु पर्ला ?
सरकारबाट सहयोग चाहियो, त्यहाँबाट सहयोग भयो भने अझ राम्रो डिजाइनमा उत्पादन गर्न सकिन्छ । अझ सस्तो मूल्यमा बजारमा दिन सक्छौ । हाम्रो उद्योगमा म्यानपावर पनि त्यति छैन त्यसकारण उच्च स्तरको डिजाइनहरु ल्याउन, कम्पनीको सियो ल्याउन, गाह्रो हुन्छ ।
अन्त्यमा आमग्राहक र गोल्ड स्टारप्रेमीलाई के भन्न चाहानु हुन्छ ?
गोल्ड स्टारलाई मन पराएर लगाउनु भएकोमा धन्यवाद । नेपाली उत्पादनलाई मन पराउनु भएको छ । तपाईहरु जस्तो ग्राहक नभएको भए हामी पनि माथि उठ्न सक्दैनथ्यौ । नेपाली उत्पादनलाई माया गर्दै जानुस्, नेपाली उत्पादन लगाइदिनुस् । कुनै पनि सरकारी कर्मचारीले गोल्ड स्टार मात्र होइन कुनै पनि नेपाली प्रोडक्स लगाइदिनुस् प्रयोग गर्दिनुस त्यसले गर्दा प्रोत्साहन हुन्छ । स्वदेशी उद्योगलाई तपाईहरुले माया गरिदिनु भयो भने स्वदेशी उद्योगले नै नेपालीहरुलाई रोजगार दिन सक्ने हुन्छन् अनि भोलिका दिनहरुमा कोही विदेशीनु पर्दैन होला ।
हात्ती छाप चप्पल कसरी बन्यो गोल्ड स्टार ब्राण्ड(भिडियो वार्ता)